LALA 4+ umntwana+sana, Nr Airport/P&J, Parking, WiFi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWes & Lyn
Icocekile, igcinwe kakuhle iibhedi ezi-2 ezilungele zombini iSikhululo seenqwelomoya + isiXeko, iP&J LIVE, iRoyal Hosp + iYunivesithi iimayile ezi-3. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umatshini wokuhlamba, iti, ikofu, ioyile, iisiriyeli. Indawo yokuphumla enesofa entle, iTV. Ibhedi yenkosi + idesika yekhompyuter. Ibhedi ephindwe kabini + ibhedi yomntwana. Tesco/Lidl/KFC/McD's 1 imayile. Ibhasi ye-Nr yeSikhululo seenqwelomoya, iP&J, iSixeko, izibhedlele, njl njl. 2nd umgangatho wokufikelela kwizinyuko. Ukupaka kwaMahla kwaneleyo. Ulala 4 abantu abadala + umntwana + umntwana. Iintsapho zamkelekile - iincwadi zokukhetha/izinto zokudlala/imidlalo. I-WiFi yasimahla. 100% zonke 5 * uphononongo.
Ukuphendula kwi-Covid-19 amanyathelo ongezelelweyo okucoca kunye nokucoca akhona kwiflethi yethu. I-Sanitiser yesandla kunye nezinye izinto zokucoca ezishiywe ukuba zisetyenziswe kwiindwendwe. Kuyasivuyisa ukuwongwa ngewonga lokuba ngumamkeli oMkhulu kwikota nganye yonyaka wokubamba iqhaza. Ukuziphatha kwethu kukubonelela ngendawo esekhaya apho thina ngokwethu singakuvuyela ukuhlala kuyo kwaye enazo zonke izinto eziluncedo esinokuzilindela ku-Airbnb. Iflethi ikwindawo ethe cwaka kakhulu kungekho ngxolo yetrafikhi, njl. njl. Lonke ulwazi malunga nendlela izinto ezisebenza ngayo, umzekelo, iWiFi, ukufudumeza, ishawari, njl. Nokuba uza e-Aberdeen ungatshatanga, isibini okanye usapho iflethi yethu ilungele iindwendwe ezifuna ukubona indawo, ukutyelela usapho okanye iinkomfa zomsebenzi okanye iminyhadala kunye neekonsathi e-P&J LIVE ngaphantsi kweekhilomitha ezi-2 kude. Inkonzo yebhasi ezinikeleyo ngobusuku bekonsathi imisa kufutshane neflethi. Ilungele iintsapho ezinebhedi yomntwana ukuya kuthi ga kwi-4/5 ubudala, kunye noluhlu lweethoyi / iincwadi / imidlalo, i-LEGO njl. Izitya zabantwana kunye nezinto zokusika. Ibhedi yomntwana yokuhamba, isitulo esiphakamileyo, i-mat etshintshayo, i-pot kunye nesitulo sangasese, i-floor play mat kunye nokukhanya kwasebusuku okukhoyo. Siyazama ukuba kunokwenzeka ukushiya ubisi kunye nesonka ukuze wenze i-cuppa ngokukhawuleza xa ufika. Iisiriyeli zinikezelwe. Iindawo zokutyela kunye neendawo ezithengisa ukutya okukhawulezayo kunye neendawo zokuhambisa zonke ezikufutshane. Uluhlu lweencwadana zabakhenkethi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo enokunceda ukucwangcisa ukuhlala kwakho ke buza.
Le yindawo ethule kakhulu kwaye asinangxaki nengxolo okanye izithuthi. Kukho iiflethi ezi-6 kwibhloko yethu, ezimbini kumhlaba, umgangatho wokuqala nowesibini. Zisoloko zikho iindawo zokupaka ngaphandle nje. Kukho iipaki ezininzi ezintle ezikufutshane, ulwandle olude olumangalisayo lukumgama oziikhilomitha ezi-4. Inqaba yaseBalmoral iyindawo emnandi yeemayile ezingama-40 ukutyhubela iRoyal Deeside indawo entle. IiDistilleries ezininzi zeWhisky ziindlela ezimfutshane zokuhamba. Isikhephe esiya eShetland naseOrkney Isles sishiya indawo yaseAberdeen Dock. Iintlobo ngeentlobo ezintle zezakhiwo ezintle kwiSixeko nakwindawo ezingqongileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Wes & Lyn
Zijonge ngokwakho ngebhokisi yokutshixa. Ababuki zindwendwe bafumaneka ngefowuni kwaye bahlala kufutshane.
UWes & Lyn yi-Superhost